Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Yenza imali ngokuBukela iividiyo ngale App
I-FunnyGo APP liqonga lokubukela iividiyo. Kule APP, abasebenzisi banokubukela amashumi amawaka eevidiyo ezidumileyo simahla kwaye benze imali.
I-HiSceneTeam isungule i-FunnyGo App yabasebenzisi e-Indonesia ngoJuni kulo nyaka. Ukuza kuthi ga ngoku, kukho abantu abazizigidi ezi-1 abakhuphele le App kwaye benze imali ngokubukela iividiyo kuyo.
Okubaluleke ngakumbi, ngelixa ubukele iividiyo, abasebenzisi banokwenza imali ngokulula kwi-APP. Ngokutsho komphathi wemveliso ye-Hisceneteam, abasebenzisi baya kufumana iingqekembe zegolide ukuba nje bekhuphela i-APP, kwaye ke banokuzihlawulela ngemali. Abasebenzisi banokufumana kwakhona iingqekembe zegolide ngokubukela iividiyo kwi-APP okanye umeme abahlobo ukuba bakhuphele i-Funnygo. Kwi-Funnygo, abanye abantu bafumene i-Rp 100,000.
Ukongeza, kukho iminyhadala emininzi kwi-FunnyGo APP. Abasebenzisi banokuthatha inxaxheba kwimisitho kwaye emva koko bafumane imivuzo engaphezulu. Umzekelo, abasebenzisi banokuba nethuba lokuphumelela i-iPhone13 ukuba bathatha inxaxheba “kwilotho”.
Umphathi wemveliso we-HiSceneTeam utyhile, ukuze anike abasebenzisi amava angcono, i-FunnyGo iyiphucule imveliso. Wonke umntu unokukhupha imali yokuqala ngosuku olunye ukuba nje ekhuphela i-APP, kwaye imali iya kufakwa ngokukhawuleza. Abasebenzisi banokurhoxisa imali ngeendlela ezininzi ezifana neDana kunye ne-OVO.
Ukuze wamkele uNyaka oMtsha, i-FunnyGo iya kusungula imicimbi emininzi ngoDisemba, apho yonke imivuzo iya kuphindwa kabini.